Kiosk Telephone Iseti yezandla, Digital iphedi yamaqhosha, yemfonomfono Hook Switch - Xianglong
Izinki ingxubevange iphedi yamaqhosha
Iphedi steel stainless
Backlit iphedi yamaqhosha
Ubungqina bokuqhekezwa kweJoiwo
Ukwanda yefoni isiqinisekiso
Ukwanda Camera Isiqiniseko
Factory yethu ikhule ibe iNkulumbuso ISO9001: 2008 umenzi eziqinisekisiweyo yobunjani ephakamileyo, Ixabiso-Effective iimveliso
umenzi kobungcali iifowuni mveliso kunye iintsimbi iminyaka engaphezu kwama-12. efektri yethu ibekwe Yuyao City China.
Warranty: Iminyaka 1 'iwaranti kunye nolondolozo. Iminyaka yokuqala enye emva kokuba zithunyelwe, siya kuba noxanduva ulondolozo simahla ukuba nayiphi na ingxaki okubangelwa mfanelo ngokwayo.
FUNDA OKUNGAKUMBI IMISEBENZI
I-switch-proof yokutshixa iplanethi yokutshixela, umnxeba iqhosha ...
Umnxeba weStainless Door Ifowuni yeJWAT412
Yuyao Xianglong Communication CO mveliso., LTD
© Copyright - 2010-2017: Onke amalungelo agciniwe. - Amandla ngu Globalso.com Guide ,Hot Products ,Sitemap ,AMP mfono
industrial ifowuni yakho , mfono Emergency , nemozulu Telephone , kuqhuma nefoni isiqinisekiso, Telephone ngamanzi , Emergency Public Telephone ,